Doorashooyinka xilliga dhexe ee Maraykanka: Hodan Xasan oo u tartamaysa aqalka wakiillada ee Minnesota - BBC News Somali
Xaafadda ay kursigeeda u tartamayso waxay degganayd tan iyo 1991
6da bishan Nofeembar waxaa la filayaa iney dhacdo doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka, waxaana murashaxiinta ka mid ah siyaasiyiin ka soo jeeda Soomaaliya. BBC-da ayaa wareysatay Hodan Xasan oo u tartamaysa mid ka mid ah kuraasta aqalka wakiillada ee gobolka Minnesota.
Hodan oo 20 sano ka hor qaxooti ahaan ku tagtay Mareykanka waxay shahaadada darajada heerka labaad ee Jaamacadda, oo loo yaqaanno Master's, ka qaadatay jaamacadda Augsburg ee ku taalla magaalada minneapolis, wakhti xaadirkanna waxay shaqadeedu ahayd caafimaadka dhinaca dhimirka.
Hodan iyo Graham Faulkner oo ah madaxa ololaheeda
Iyadoo ka hadleysa waxa ay ka rajeyneyso natiijada doorashada ayay tiri: "Filashadeydu waa guul inshaAllah, maxaa yeelay shaqo badan ayaan ka soo qabanay doorashadan, sannad ayaan hadda sii mareynaa, xaafadda aan ka tartamayana waa xaafad ay inta badan ka codeeyaan dadka taageersan xisbiga Dimuqraaddiga, anigana waxaan ku tartamayaa dalladda xisbiga dimuqraaddiga. Marka guul weyn unbaan sugeynaa".
Su'aashaas waxaa ka jawaabeysa Hodan Xasan oo markii ugu horreysay u taagan xil siyaasadeed iyadoo ka soo jeedda garabka dimuqraaddiga.
"Farqiga aan ku kala doorannay xisbiga Jamhuuriga iyo midka Dimuqraaddiga waa in midkood, oo ah Dimuqraaddiga, uu ogolyahay jiritaanka qofka midabkiisu madow yahay, uuna aqbalo in miiska lala soo fariisto oo wax lala qeysado. Laakiin xisbiga Jamhuuriga waxaa ku jirta islaam nacayb, cunsuriyad ku saabsan iney neceb yihiin dadka midabka madow leh, sidaas ayaana ku kala doorannay, waayo qof bani'aadam ah oo damiir leh ma taageeri karo xisbiga aan jiritaankiisaba aqoonsaneyn. Xisbiga Dimuqraaddiga ahna waa xisbi soo dhaweeya dadka danyarta ah, dadka soo galootiga ah iyo dadka leh diimaha iyo midabbada kala duwan".
Hodan oo ku jirta ololaha doorashadeeda
"Waa macquul in hadalka Trump uu yareeyo taageerada siyaasiyiinta qaxootinnimada ku soo galay, laakiin aniga waxaan aaminsanahay taas lidkeeda. Mar walba oo uu Trump caayo dadka qaxootiga ah iyo muslimiinta, inta badan dadka Mareykanka ah waxay qaataan fikir ka duwan kiisa, waxayna soo dhaweeyaan dadka soo galootiga ah iyo islaamka".
Guusha doorashadaas ayaa u saamaxaysa madaxweyne Trump inuu awood u yeesho labada sano ee u dhoiman inuu meel mariyo shuruuc hor leh, ama uu noqdo madaxweyne iska dhamaysta wakhtiga u dhiman.
Maxaa u qorsheysan Ahlu Sunna dagaalkii Guriceel kaddib?
Maxaad ka taqaannaa diyaaradda Turkiga ee Ukraine u adeegsato dagaalka Ruushka kala dhaxeeya?
Shirkadda Facebook oo magaca iska baddashay
Muxuu yahay qabiilka yar oo laf dhuun gashay ku noqday Maxamed Bin Salmaan
Saddex qaab oo lacag looga sameeyo TikTok